Nchọnchọ Online - Ịbụ onye nwere ike ịntanetị nwere ike ihu ọtụtụ ihu
Search Online | Media Internet
Mgbaàmà na ihe kpatara eji eri ahụ
Kedu ka ị ga-esi na-emeso ahụike riri ntaneti?
Nwa m ọ dị ntanetị n'ịntanetị?
Ụlọ ahịa ịntanetị ọ dị? N'okwu nke a, ihe ọ bụla ha na-enweta na ndụ ha kwa ụbọchị nwere ike ịghọ mmadụ. Site na telivishọn nakwa site na mmanya, sịga ma ọ bụ nri. N'ezie, ebe ọ bụ na ịntanetị, kwa.
A na-achọkarị ịṅụ ọgwụ ọjọọ na onye ahụ na-eri ahụ enweghị ike ịnwe ndụ n'enweghị ihe ndekọ akwara, na nke a, Intanet. Nke a na-eri ahụ nwere ike inwe ọtụtụ ihu ma dị iche na ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ. Otu onye n'ime ndị na-ahụ Intanet asaa taa na-ekwu na ụdị ahụ riri ahụ. Ka ọ dị ugbu a, a na-anakwere ịṅụ sịnịma n'ịntanetị dị ka ọrịa.
Ịntanetị jikọtara nwoke na nwanyị
Na-adabere na ihe kpatara ihe ntanetị n'ịntanetị, àgwà ndị ọzọ dị na mbụ. Otú ọ dị, nke bụ eziokwu bụ na nwoke na nwanyị na-enwekarị ike igwu egwu n'ịntanetị.
Ma egwuregwu nke ohere ma ọ bụ agha abụghị ihe dị mkpa ebe a, ọ bụ ihe gbasara àgwà dị oke egwu nke igwu kọmputa.
Ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ ga-enwe ike ịnọ na forums oge niile, na-ekerịta ikpo okwu na-akparịta ụka na-adịghị akwụsị. Kọmputa na-arụ ọrụ n'oge elekere, ọ dịghị ihe na-arụ ọrụ na-enweghị ya.
O doro anya na ókèala dị n'agbata riri ahụ na ịṅụkarị ya na-adị na mbụ, n'ihi ya, i nwere ike ịhụ ntanetị ịntanetị ruo ogologo oge. Otú ọ dị, ọ bụrụ na gị mgbe niile na-anọdụ elu abalị na kọmputa, na-ehi ụra dị nta, na-amalite ya nri na kọmputa, bụ ndị leghaara enyi na achikọta ọzọ na ndị ọzọ na-ebi ndụ na mebere ụwa, kama bụ n'ezie bụ nwere online-eri ahụ ma ọ bụ n'ihe ize ndụ nke ịghọ ya.
Mmetụta mgbasa ozi - ijikwa smartphones na kọmputa
Nhụsianya nke anụ ahụ na-ebutekwa ya na ịntanetị. Na mgbakwunye na nsogbu anya nwere ike ime ka mgbu na esemokwu kwụsị, n'ihi ọtụtụ ndị nọ ọdụ. A na-eleghara nlekọta ahụ anya dị ka nke na-eri ihe ndị ọzọ. Nke a pụdịrị ịga na nleghara anya.
Ọtụtụ ihe na-akpata ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ntanetị bụ nsogbu ọzọ nke uche, n'ihi na ntanetị ịntanetị abụghị ọrịa nwere onwe ya. Ọgwụ ọjọọ na-ejikọtakarị na mgbaàmà obi mgbawa, na nsogbu nchekasị na nsogbu ndị ọzọ, bụ ihe mgbaàmà nke otu n'ime ọrịa ndị a, ya mere.
Eziokwu yiri ka ejighị n'aka, ọ bụ naanị ụwa a na-eme ka e nwee nchebe. Mmetụta onwe onye nke ndị na-eri ahụ n'Ịntanet, dịka nke ndị ọzọ na-eri ahụ, anaghị adịkarị ike. Ọ bụrụ na mechibidoro kọmputa, ma ọ bụ enweghị ike iji Intanet, ihe mgbaàmà dị ka mgbakasị, nkwụsịtụ, na ịda mbà n'obi apụta.
Dị ka ihe niile na-eri ahụ, nkwenye nke riri ahụ na-abịa mbụ.
Ịṅụ ọgwụ ọjọọ riri ahụ maka ndị okenye
Ozugbo a ghọtara ma ọ bụ ekweta na ịntanetị, ọ na-enyere aka mgbe ọ bụla ịchọta onye ọkachamara iji chọpụta ihe kpatara nsogbu ahụ riri ahụ, ya bụ, otu n'ime ọrịa uche ndị a kpọtụrụ aha n'elu.
Ọ bụrụ na a na-emeso ya, ịṅụ ntanetị online na-ewekwa oche azụ. Onye ọrịa ahụ aghaghị ịghọta na Intanet enweghị ike idozi nsogbu ya.
Na mbido, ọ na-enye aka ibelata oge Ịntanetị site na nzọụkwụ iji mee ihe kwa ụbọchị: ịgha ubi, ịga ije, iri nri, ndị enyi nzukọ.
A ghaghị ịmụta omume a n'ụzọ nkịtị. Enyemaka enyemaka nke onwe-gi nwere ike inyere gi aka n'oge a na karia.
Ma nsogbu a nwere ike ime ka nwatakịrị ahụ nwee nsogbu ahụ, ma ọ dịkarịa ala ọ nwere ike ịkọwa ma ọ nwere ihe ize ndụ. Lezie anya ma deba oge nwa gị na-eji na Intanet. Nanị nke a bara uru.
Ọ bụrụ na ị nwere nchegbu, nhazi na ọkachamara nwere ike inye aka. Ọzọkwa, ị ghaghị ịchịkwa oriri ahụ ma jide n'aka na nwa gị na-eme egwuregwu na ọtụtụ ndị ọgbọ ọnụ, n'ezie, na-enweghị Intanet iji mee ihe! Onye ọ bụla nke na-ebi ndụ na-adị ndụ na-adịkarịghị eri ahụ!
Gịnị kpatara akwụkwọ ụmụ? | Akwụkwọ mgbasa ozi
Kọmputa & Ịntanetị maka ịmalite
Ụmụaka nyocha ụmụaka | Ụmụaka na Intanet